बनेपाको समग्र विकासको लागी मेरो उमेद्धारी - Janata Ko Aawaj
बनेपाको समग्र विकासको लागी मेरो उमेद्धारी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन ०१, २०७८ समय: १२:५६:०५
काभ्रे – शान्तिरत्न शाक्य नेपाली काङ्ग्रेस बनेपाको क्रियाशिल व्यक्ति हुन् । उनी बनेपा शहरका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी एक सफल ब्यवसायी पनि हुन । काभ्रे जेसिसको नेतृत्व समालिसकेका शाक्य तत्कालिन बनेपा नगर वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष भएर जनप्रतिनिधिको अनुभव पनि छ । नगर सभापति भएपछि नगर पिता बन्ने सहज बाटो खुल्ने हुँदा उनि बनेपा कांग्रेसको सारथी बन्न हौसिएका हुन । उनलाई काङ्ग्रेस नेता कन्चनचन्द्र बादेको साथ छ सभापति मधु आचार्यको आशिर्वाद छ। नगर अधिवेशनको सेरोफेरोमा इपाना नेपालले शाक्यसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सम्पादक ।
•नगर सभापतिका उम्मेदवारहरु अरु पनि हुनुहुन्छ, र तपाई अनुभवी पनि हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा अरु उम्मेदवारहरु भन्दा तपाईंलाई कुन कुन कुराहरुले योग्य हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ ?
​मेरा प्रत्यासी साथीहरु पनि सक्षम हुनुहुन्छ । उहाँहरुले पनि संगठन विस्तारको लागि आफ्नो योगदान दिनु भएको छ । तर प्रतिस्पर्धामा जित्ने एक जनाले हो । मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा साथीहरुसंग भेटघाट गर्दा, कुरा हुदा जुन साथ र सहयोग पाएको छु त्यसले गर्दा नि म अगाडी बढ्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ । मैले आफ्नो जीवनकालमा नेपाली कांग्रेसको विभिन्न पदहरुमा बसी जे जति अनुभव पाएको छु, र नजिकमा बसी कमि कमजोरीहरु नियाली समाधान गरेको छु, मलाई लाग्छ त्यस्ता कुराहरुले गर्दा अरु भन्दा म परिस्कृत भएको छु । म एउटा लक्ष्य बोकेर आएको छु । त्यो भनेको नेपाली कांग्रेसको नगरमा संगठन पुनर्निर्माण र विस्तार गर्नु हो । त्यसैले मैले आफुलाई एउटा योग्य उम्मेदवारको रुपमा अघि सरेको हुँ ।
•नगरभित्र पार्टीको प्रभुत्व बढाउनको लागि यहाँले के कस्ता योजनाहरु अघि बढाउनु भएको छ ?
हिजो जुन गर्वको साथ हामी हिंड्ने गथ्र्यौ, आजको दिनमा हामीमा हुने नैतिक धरातलमा अलि कमी आएको देखिन्छ, यसलाई हामीले परिपूर्ति गरेर सबैलाई साथ लिएर अगाडी बढ्न पर्ने देखिन्छ । यस्ता कुराहरुलाई अघि बढाउन पार्टीको सैद्धान्तिक विचारहरु देखि लिएर नगरको समग्र विकासका योजनाहरुसम्म सभ्य तथा सु-सृजित ढंगले प्रभाव बढाउने योजना राखेको छु । यसमा अग्रज तथा साथी भाइहरुको नि साथ सहयोगको अपेक्षा राखेको छु ।
•संगठन बलियो बनाउन यहाँको के कस्ता योजनाहरु छन् र कसरि कार्यन्वयन गर्ने सोच्नु भएको छ ?
​संगठन बलियो बनाउने नै मेरो प्रमुख योजना हो । पार्टीको प्रशिक्षण देखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने मेरो लक्ष्य छ । जुन कुराहरु मैले अघि नि भनिसकें । अर्को प्रमुख कुरा भनेको, पार्टीको आधार भनेको यसको भात्री संगठनहरु हुन्, त्यसैले नगर भित्रका भातृ संगठनहरुलाई चुस्त राखी संचालन गर्ने मेरो मनशाय छ ।
• ०४६ साल देखि नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न पधहरुमा बसी आउनु भएको छ, यतिका वर्षमा के कस्ता कमजोरीहरु पार्टीभित्र देख्नु भएको छ ?
मैले बिगतमा हामी सबै सँगै मिलेर जानुपर्छ पार्टी एकताको नामले भनेर मैले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थिए । त्यो कारणले गर्दा बनेपा नगरमा भएको नेपाली कांग्रेसको तेह्रौं अधिवेशन निर्विरोध रुपले सम्पन्न भएको थियो । आजको दिनमा म बनेपा नगरमा नेपली कांग्रेसको क्रियाकलापलाई अझै सशक्त रुपले वृद्धि गराउनका लागि मैले आफुलाई अगाडी सरेको छु । कमजोरीहरु धेरै छन्, हाम्रो पहिलाको नेपाली कांग्रेस नगर कमिटीले जनताको विश्वास जित्न सकेन र हामीले स्थानीय चुनाबमा हार व्यहोर्न पर्‍यो । पार्टी विच धेरै असमझदारीहरु छन्, एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने चलन फस्टाएको छ जुन नेपाली कांगेसको सभ्यता होइन । जनता माझको विश्वास अभिवृद्धि गराउनका लागि मैले आफ्नो तहबाट नि प्रयास गरेको छु भने संगठनलाई अझ बलियो बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो ।
•नगरमा संगठनलाई बलियो बनाउन तपाइको खासै केहि भूमिका छैन भन्ने आक्षेपहरु पनि सुनिन्छ, यसलाई कसरी प्रष्ट्याउनु हुन्छ ?
​मैले भर्खरै पनि भने, आक्षेपहरु धेरै आउँछन् तर यस्ता कुराहरुको प्रतिरोध गर्न मेरा पछिल्ला क्रियाकलापहरु काफी छन् जस्तो लाग्छ । पार्टीका साथीहरुले मुल्यांकन गर्नु भएकै छ ।
•कांग्रेस आफैंमा बाँझेर सकियो भन्छन, अघिल्लो स्थानीय चुनावमा तपाई नि यो कुरामा मुछिनु भएको थियो, यो कुराबारे तपाइको धारणा के छ ?
​बनेपा कांग्रेसले संगठन बलियो बनाउन नसक्नु नै चुनावमा हार व्यहोर्नुको कारण हो । अझ साथ सहयोग गर्दागर्दै पनि आरोपहरु लगाउने बानी छ । यस्ता परम्परालाई चिर्न जरुरी छ ।
•वि.पी.को विचार लगभग आम जनताबाट वा कांग्रेसकै कार्यकर्ताहरुबाटै पनि लोप हुने अवस्थामा छ, आफ्नो नगरमा विपीवादलाई जोगाइ राख्नको निम्ति तपाईबाट के कस्ता पहलहरु हुन्छन् ?
प्रश्न एकदम जायज छ । नेपाली कांग्रेस भित्रै एतिका विसंगति हुनुको कारण पनि वि.पी का विचारहरु, पार्टीका मौलिकताहरु लाई ध्यान नदिएर व्यतिगत स्वार्थ सिद्धिको राजनीति हावी हुनु हो । अहिलेका प्रमुख नेताहरूमै यी कुराको कमी देखिन्छ । त्यसो हुँदा कार्यकर्तामा विचार, सिद्धान्तको कमी आउनु स्वभाभिक नै हो । यस्ता कुराहरुको सामाधानको निम्ती पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रम, नगर भित्र व्यापक रुपमा बढाउने योजना राखेको छु । हाम्रो पार्टीको आफ्नै विभागहरु छन्, विज्ञहरु हुनुहुन्छ । वहाँहरुलाई निम्त्याएर जनस्तर सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत विपी वादलाई बढाउने मेरो लक्ष्य हो । मलाई लाग्छ, यो कुरा हुन साथ पार्टीमा रहेका अनेकन विसंगतिहरु पनि सँगै लोप भएर जाने छन् । अर्को महत्वपुणर् कुरा भनेको र अहिले सम्म हुन नसकेको कुरा भनेको नगरको भावनालाई केन्द्र सम्म पुर्याउन नसक्नु हो, येसलाई पनि मुर्त रुप दिन म निरन्तर लागेको छु र अझ प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाउने छु ।
•युवावर्गहरुमा राजनीतिक बितृष्णा बढ्दै गएको छ । यसमा तपाइको धारणा के छ ?
​यो कुरामा सत्यता छ । युवावर्गहरुमा राजनीतिक बितृष्णा बढ्नु को मुख्य कारण भनेकै अभद्र राजनीति जुन यहाँ मात्र हैन नेपालभरी छाएको छ, हो । युवाहरुमा राजनीतिक चेत नआएसम्म समाज र देश विकासको कार्य सहज छैन । त्यसैले म युवावर्गमा पनि कसैको कुरामा नलागी अध्ययन र अनुसन्धान गरी राजनीतिक योजना, निणर्य र बाटोमा सहभागी हुन आव्हान गर्दछु ।
•पार्टीको अधिवेशनमा मत विभाजित हुने गरेको छ, जसले स्थानीय चुनावमा सोझै असर राख्छ, अधिवेशन पश्चात पार्टीको मतलाई कसरी एकीकृत गर्ने विचार राख्नु भएको छ ?
कसैलाई दोष लगाउने, लाञ्छना लगाउने मेरो बानी छैन । मैले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएर सिकेको पनि त्यहि हो । समग्र नगरको विकास गर्न, पार्टीलाई अघि बढाउन कोहि साथीहरुलाई हिच्किचाहट हुन्छ जस्तो लाग्दैन, फेरी पार्टी पछि पर्नु भनेको हामी आफै पछि पर्नु पनि हो । त्यसैले अधिवेशन पश्चात् हामी सबै एक ढिक्का भएर स्थानीय तथा अन्य तहको चुनावहरुमा जित हात पार्न लागि पर्ने छौं भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
•यदि तपाई निर्वाचित भएको खण्डमा, पुराना कमी कमजोरी हटाई पार्टीलाई चुनावमा जित दिलाउन कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु हुन्छ ?
​सबभन्दा पहिला त संगठन नै हो, म पहिला संगठनको पुनर्निर्माणमा लाग्छु भन्ने मेरो दृढ संकल्प छ र यसको लागि कुनै पनि काम गर्न म पछि हट्ने छैन, यस संकल्पमा मलाई साथ दिने साथीहरु नि हुनुन्छ र राम्रो कामको लागि सबै साथीहरुले साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर म विश्वस्त छु । संगठन विस्तारको कुरा गर्दा हामीले सबैतिर सदस्यहरुलाई सक्रिय बनाउन काम र कार्यक्रम लैजाने छौ । यसरी हाम्रो कामले जनतामा सकरात्मक छवि हुन जान्छ र आउँदो चुनावमा अवश्य नै हामीलाई जनता को साथ हुनेछ ।
•जनताको भावना स्थानीय सरकारसँग पुगिरहेको छैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यदि तपाई निर्वाचित हुनुभयो भने एउटा पार्टीको नगर सभापतिको हैसियतमा कस्तो योगदानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
​मैले विभिन्न ठाउँमा घुम्दा देखेको महसुस गरेको छु, मलाई यती चाहिँ विश्वास छ जुन दुर्गति हामी सबैले महसुस गरेका छौ ः घाम लाग्दा धुलोले बाटो नदेख्ने पानी पर्दा हिलोले गर्दा हिँड्ने नसक्ने र पटक पटक नगरपालिकालाई सजग गराउँदा पनि लापरबाहीले गर्दा एस्तो दुर्गति भएको हो । विकासका योजनाहरुमा हाम्रा एमालेका साथीहरुले बेवास्ता गरेको देखिन्छ यस्ता कुरालाई चिरेर हामीले राम्रो बनेपा बनाउनको लागि विकासका योजनाहरु अगाडी सार्नुपर्छ । हामीले हिजो पनि एउटा प्रतिपक्षको हैसियतले वारम्बार जनतामा परेको बाधा, अर्चन तथा समस्याहरु लिएर स्थानीय सरकार समक्ष ढोका ढक्ढकाएको थियौं, खवरदारी गरेको थियौं जुन अझै कायमै छ । त्यसैले, यस्ता कुराहरु जुन जनताको आधारभूत अधिकारहरु भित्र पर्छन, हामी अथक रुपमा निरन्तरता दिने नै छौ ।
•एतिहासिक सहर बनेपा, विकासको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि चपेटामा परेको देखिन्छ । सहरको ऐतिहासिकता, कला, संस्कृति जोगाउँदै दिगो विकासका लागि पार्टीले के कस्ता पहलहरु अगाडी बढाउने छन् ?
​अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने सहरको ऐतिहासिकता, कला, संस्कृतिलाई बिल्कुलै नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ । यस्ता कुराहरुलाई जीवन्त राख्न जरुरी छ । किनकी धर्म, संस्कृति, कला नै हाम्रा पहिचान हुन् । हाम्रो पार्टीको आफ्नै भाषा, कला विभाग पनि छ । आधुनिक विकासलाई निरन्तरता दिदै, आफ्नो इतिहास र पहिचानलाई कसरी सँगै लग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पार्टीले जोड दिनेछ, जुन सम्भव छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र, चीन यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
•विभिन्न देश विदेशहरु भ्रमण गर्दै गर्दा, त्यहाँका नगरहरु हेर्दा, बनेपा सहरको आर्थिक, व्यापारिक तथा पर्यटकीय सम्भावना कत्तिको देख्नु भएको छ ?
​मैले जानेको, देखेको अनुभवहरु मेरा अप्रत्यक्ष गुरु हुन् । यसरी हेर्दा मैले हाम्रो सहरको सम्भावना अधिक देख्छु । यो एउटा व्यापारिक केन्द्र हुन सक्छ । अहिले पनि यो अरनिको राजमार्ग र वि.पी.राजमार्ग जोड्ने विन्दु भएको छ तर व्यवस्थित र दिगो विकास योजनाको कमीमा असारे विकासले गर्दा हाम्रो सहर पछि परेको छ । हामीसँग भएका ऐतिहासिकता, कला तथा संस्कृति हाम्रो पर्यटकीय श्रोतहरु हुन सक्छन, जुन कुरा अर्थ र व्यापारसँग पनि जोडिएको छ ।
•अन्त्यमा केही ?
​अन्त्यमा, जति जना उम्मेदवारहरु फिल्डमा आउनुहुन्छ, कमसेकम जोख्नुस्, भोलिको लागि कुन चाहिँ उपयुक्त छ, सोच्नुस् । मत राख्नुभन्दा अगाडि एकचोटी सोच्न व्यक्तिगत रुपमा अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि शान्तिरत्न शाक्य उपयुक्त छैन भने तपाईंको मत सम्मान गर्दै स्वीकार्न चाहन्छु । पुनः एकपटक अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले वर्षौंदेखि पार्टीको कार्यकर्ताको रुपमा कार्य गरेको, विभिन्न पदमा जिम्मेवारी निर्वाह पनि गरेको छु । त्यही पदहरुभन्दा माथि नगर सभापति भएर काम गरेर देखाउँछु भन्ने मेरो चाहना हो । त्यसैले मलाई नगर सभापतिमा जित हासिल गर्नमा तपाईंहरुले सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । जय नेपाल ।
काठमाण्डौं । अमेरिकामा रहेर पनी नेपाली सुगम संगीतमा कलम चलाइरहेकी भगवती न्यौपानेको शब्दमा रहेको ’माइला माइली’ गीतको भिडि...
जितेन्द्र कांग्रेसमा प्रवेश
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का दलित शिल्पी विशेष समिति प्रदेश नं १ का उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय मुसहर संघ मोरंङ जिल्ला अध्य...
काठमाडौं । विगत लामो समय देखि सामाजिक कार्यमा क्रियाशिल संस्था राई मुलघर सेवा समाजले संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र र ...
‘रिभेन्ज’को विशेष सो इटहरीमा
काठमाडौं : डिएस डिजिटल सिनेमाको व्यानरमा मोहन गमालको प्रस्तुति रहेको चलचित्र ‘रिभेन्ज’को विशेष सो इटहरीको इलाइट सिनेमामा...
कांग्रेस नगरसभापतीमा चापागाँई बिजयी
विराटनगर,कांग्रेस विराटनगर महानगरसमितिको शनिबार भएको अधिवेशनमा सभापतीमा दीपक चापागाई बिजयी भएका छन । चापागाई दुई सय १२ म...
विजय पुन मगर र जानुका नेपालको“छरेर ढुंगामा मायाको बिउ ” सार्वजनिक
काठमाण्डौं । गायक जनक विवस न्यौपानको आवाजमा रहेकोे “छरेर ढुंगामा मायाको बिउ ”गीतको म्युजिक भिडियो सानवी इन्टरटेन्मेन्ट म...